Ndisusa njani okanye ndicime iAkhawunti yam yePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 430
Uninzi lwabantu lunokudlula kwinkqubo yokufuna ukucima iakhawunti yePinterest okanye ukuyikhupha ukuze ufumane iziphumo ezingcono xa kuziwa ekufumaneni iziphumo ezingcono. Mhlawumbi abantu abaninzi bayazibuza ukuba kutheni ingumbono olungileyo lowo khuthaza ukusetyenziswa kweakhawunti.
Ukukwazi ukucima okanye ukucima iakhawunti yinto enokubangela ukuba abantu baphefumle imidiya yoluntu okanye banyamalale ngenxa yengxaki. Alithandabuzeki elokuba ngumbono ogqithileyo wokuba simke kuluntu lwedijithali kwaye siphuhlise izimvo ezingcono ezisinika iziphumo ezimangalisayo.
Akunakwenzeka ukuba ufuna ukulungisa zonke iimeko ezikwi-intanethi kwaye uzive ugugile yimeko embi enokubangelwa ngabantu. Nangona kunjalo, kunokwenzeka kakhulu ukuba in I-Pinterest yenza yonke into echaseneyo, kodwa kwangaxeshanye kuthatha ixesha lakho ukuba ujonge izikhonkwane ezinomdla kunye nezithuba.
Abanye abantu bathi ukuthanda kwabo iiwebhsayithi zokunxibelelana kudlula zonke izinto ezinokwenzeka. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha umbono olungileyo kukukwazi ukuyeka usuku nosuku kwaye hlala uxolelwe kwinto eyenzekayo kwihlabathi ledijithali.
Amaxesha amaninzi siyalibala ukuba iminyaka yedijithali injalo, nangona ibandakanya iipesenti ezingama-90 zemisebenzi namhlanje, kulungile ukuba sijonge into ekhoyo kwilizwe lokwenyani. Phuma uye kuncokola nabahlobo, wenze imisebenzi enokubangela ukuphazamiseka kubasebenzisi, ukukhuthaza iiprojekthi zokuyila, njl.
Ke ngoko, ngezantsi uza kubona Izizathu zokuba iakhawunti yePinterest icinywe okanye icinywe Okwangoku.
Ngamanye amaxesha sithatha iPinterest okanye naliphi na elinye iphepha njengesixhobo sokulondolozwa kwezimvo, kwaye eneneni iintsuku zethu kunye nobomi beqonga buhamba. Uluvo olukhulu kukuthatha ukuphefumla kwaye ulungiselele yonke into engahambanga kakuhle ngexesha elicwangcisiweyo.
Izimvo zicwangciswe kakubi
Abantu bahlala bekholelwa ukuba ngenxa yokuba umbono ungakhange uhambe njengoko bekucwangcisiwe, kungcono ukuba uhlale uzama. Mhlawumbi ngamanye amaxesha ngumbono ogqwesileyo, kodwa ulungile phumla kwaye ucinge ngentloko epholileyo kwenzeka ntoni, kuba oku unokwenza okwethutyana wenze iiakhawunti
Ngenxa yezizathu ezichazwe apha ngasentla, umbono olungileyo kukulandela amanyathelo aza kuphakanyiswa ukufikelela kwiziphumo ezingcono.
Kuya kufuneka ucofe i icon enamanqaku amathathu
Kuyimfuneko ukukhetha ukhetho lwe: "Useto"
Ixesha lokufaka useto lweakhawunti
Khetha isithuba: "ukungasebenzi kwe-akhawunti"
Ngexesha lokwenza la manyathelo, iqonga liza kucela iingcaciso malunga nokuba kutheni uzakuthatha ikhefu. Ungabeka ntoni ufuna ukwabelana kwiphepha.
Kwelinye icala, ukucima iakhawunti kunokwenzeka ukuba uyenze ngokwamanyathelo afanayo akhankanywe apha ngasentla. Kodwa esi sigqibo sibaluleke kakhulu ekuthatheni isigqibo kwaye ke kufuneka senziwe ngokufanelekileyo.
1.1 Ukungabikho kwexesha
1.2 Izimvo zicwangciswe kakubi
2 Ndicima okanye ndicime iakhawunti yam yePinterest?